Nezvedu - Chapman Technology Co., Ltd.
Welcome to Chapman Muiti kambani, Iyo yakavambwa muna 2008. Tine SGS certification uye ISO 9001 yemhando yepamusoro sisitimu.
Munda munda, Chapman Maker inoratidzira mukugadzira uye kugadzira kwemarudzi ese epurasitiki muforoma neHASCO, DME, LKM, MISUMI standard ine chakuvhuvhu kuyerera kuongorora. Isu tinopa DFM kune vatengi vane mumazuva maviri ekugadzirwa kweforoma ine hunyanzvi hwekuita. Isu tinopa mhando yakanaka uye yakanakisa sevhisi kune vekunze vatengi vane mushumo wevhiki nevhiki wekugadzira maitiro.
Chigadzirwa kusimudzira munda, Ngatiitei pfungwa yako ive chinhu chinooneka uye chinotengeswa. Isu tine chishuwo chekugadzirisa matambudziko kuburikidza nekunyatso kuongorora uye nekufunga dhizaini. Neinjiniya, dhizaini, kuronga, uye kugadzira mumba, hapana chatisingakwanise kugadzira.
Chapman Muitiine simba rinodikanwa rebhiza kupedzisa mapurojekiti panguva yakatarwa, hunyanzvi-hwakagadzirirwa kubata yakawanda yegadziriro yekusimudzira pazvinodiwa, uye hunyanzvi hwekutsvaga mhinduro kumatambudziko akaomesesa. Nekubatanidza dhizaini neinjiniya pamwechete, isu tinotora mazano kumberi, nekukurumidza, tichipa vatengi vedu zvinotyairwa nevatengi, zvekugadzira-zvine hungwaru dhizaini pasi pezvirongwa zvakaomarara.
Kufunga kwedu kukuru kwemufananidzo kunochengeta zvinangwa zvako kumberi nepakati. Isu tinobatsira vatengi vedu kugadzira uye kuunza kumisika zviitiko zvinowedzera mhando yavo uye zvinopfuura zvinodikanwa nevatengi. Iko kudyidzana kwakagadzirirwa kuve kunomanikidza padanho remuviri uye remanzwiro uye chisimbiso chevatengi vedu 'brand vimbiso. Yedu tarisiro iri kune edu ekupedzisira magumo zvibodzwa. Kunyangwe zviri zvinangwa zvebhizinesi, zvinangwa zvemhando, kana kuronga zvinangwa isu tinoshanda takabatana pamwe nevatengi vedu kuti tizviite.
Isu tinopa imwechete-yekumira sevhisi kune vatengi nekugona kugona, kugadzira, mainjiniya, kugadzira uye kugona kwemhando yepamusoro uye mutengo wemakwikwi.
"Kugadzira kukosha kwevatengi uye kuigadzira yakakwana" ndiyo uzivi hwedu. Iwe unozoona purofiti yakakura nekushanda pamwe chete Chapman Muiti!